Debian 10 "Buster" Ichauya Nayo otomatiki Chengetedzo Kuisirwa | Linux Vakapindwa muropa
Vasikana nevakomana veDebian Project vanga vachishanda nesimba pane yazvino maDebian vhezheni pamwe nekuburitswa kwakaitika mumazuva mashoma apfuura, asi ivo vari kushandawo zvakaomarara mukusimudzira kwemberi. Isu tatozviziva izvozvo Debian 10, codenamed «Buster» ichaunza system iyo ichaisa otomatiki zvigadziriso zvekuchengetedza. Isu takadzidza izvi zvekutenda kumusimudziri Cyril Brulebois anga achitarisira kuita chiziviso ichi apo wechipiri Alpha Kuburitswa kweakakurumbira Debian GNU / Linux kugoverwa kwaitwa kuti kuvepo, uko kuchabudirira yazvino vhezheni 9.x.
Kana iwe waona iyo nyowani Debian Installer Buster Alpha 2 Kusunungurwa Iyo inouya neshanduko dzakakosha, senge uku kuwedzerwa kwekumisikidza kwekumisikidza kwekuchengetedzwa kwekumisikidza nekutadza, iyo inovimbisa kudzivirirwa kukuru kwenzvimbo yedu. Uye zvakare, isu tichaonawo mufananidzo we64-bit MIP Mhuri mapurani emhuri. Uye nerombo rakanaka izvo hazvisi izvo zvega zvinhu zvitsva zvakaitwa mune ino vhezheni yeDebian kubva kune ayo ese zvigadzirwa zvigadzirwa seUbuntu pakati pemamwe akawanda madistros anofudza ...
Imwe shanduko yakakosha yeiyi yechipiri Debian GNU / Linux 10 "Buster" alpha ndiko kuwedzera kwe Linux kernel 4.13, dzakateedzana dzazvino uno pamwe neese madhiraivha eiyo yako Hardware uye zvese zvigadziriso zvinowanikwa mune ino kernel. Uye zvakare, ramangwana reDebian Alpha 3rd kuburitswa uko kunouya kwete nguva refu yapfuura kunounza imwe kernel kunyangwe yazvino kubva kune izvo zvinogona kugadziriswa nekuti vhezheni yataurwa pamusoro yasvika kumagumo ehupenyu mwedzi wapfuura, pamwe nekubatanidzwa kwerutsigiro rweLinux 4.14 LTS , iyo vhezheni ine rutsigiro rwakawedzerwa sezvaunonyatsoziva.
Uye kana iwe uchifunga kuti ndidzo chete nhau Wakatadza, zvirokwazvo mamwe ese mapakeji akaisirwa mu distro akagadziridzwa kune mamwe maazvino vhezheni, dzimwe shanduko dzinokanganisa systemd, nezvimwe. Kune rimwe divi, Syslinux ikozvino inotsigira EXT4 64-bit, uye rutsigiro rwakawedzerwa kune mamwe mabhodhi eSBC akadai seA20-OLinuxXino LIME2, FriendlyArm Nano Pi M1 Plus, uye vamwe vanobva kuMarvell. Hapana chakakosha kukosha ndiko kutsigirwa kwemutauro iko zvino kwakwira kusvika pasi pemakumi manomwe nemashanu mitauro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 10 "Buster" ichauya ne otomatiki kuchengetedzwa kumisikidzwa